Guurka Dhex Mara Soomaalida iyo Ajaanibta | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
BBC Somali — November 23, 2018
Aragtiyahaas waa kuwo ku salaysan qof kasta iyo fikirkiisa, laakin halkan waxaan ku eegaynaa qaar ka mid ah dadka magaca leh ee ajaanibta qaba. Waxaa ugu horreeya Sahra Maxamed Cabdulmajiid oo loo yaqaanno Iimaan. Waa gabar Soomaali ah oo dharka xayeysiisa. Waxay mar ka soo muuqatay heesta ‘Remember the time ee Michael Jackson oo sidoo kalena uu ku jiray jilaaga caanka ah ee Eddie Murphy.
Iimaan iyo david Bowie waxay is qabeen 24 sano. Waxay is qabeen heesaagii geeriyooday ee Ingiriiska u Dhashay, David Bowie, 1992 – 2016.
Sawirka hoose waa Saabriin Dhoorre (Sabrina Dhowre) waa 29 jir asalkeedu Soomaali yahay, laakiinse ku dhalatay, kuna barbaartay waqooyiga Ameerika.
Tags: Guurka Dhex Mara Soomaalida iyo Ajaanibta
Next post 2 Buugg oo La Isku Haysto: -Maxaa talo ah oo aad ku biirin lahayd odayaashas?
Previous post Haweenay Karsatay Hilbaha Nin Xiriir Jeceyl Kala Dhaxeeyay